Beae bi a wɔfrɛ no Kronkronbea? Ɛsɛ sɛ Kristofo Som wɔ Baabi a Wobu No sɛ Ɛyɛ Kronkron?
Ɔwɛn-Aban | No. 2 2016
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
SUPƆW bi wɔ Japan a wɔfrɛ no Shima. Kwae bi wɔ hɔ a kyeneduru nnua ayɛ mu ma. Ɛhɔ na Ise Asɔredan Kɛse no wɔ, na afe biara nnipa bɛboro ɔpepem nsia tu kwan kɔ hɔ. Ɛyɛ baabi a wɔasom Shinto nyamewa Amaterasu Omikami bɛyɛ mfe mpem mmienu ni. Saa nyamewa no asomfo di kan hohoro wɔn nsa ne wɔn anom de dwira wɔn ho. Afei wogyina asɔredan no anim yɛ amanne bi. Amanne a wɔyɛ no bi ne sɛ, wɔbɔ wɔn mu ase, bɔ wɔn nsam, na wɔbɔ nyamewa no mpae. * Sɛ obi yɛ Shintoni a, otumi san kɔ asɔre foforo. Enti Buddhafo binom ne wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo ne afoforo tumi yɛ saa Shintofo amanne no bi wɔ saa asɔredan yi mu.
Ɔsom akɛseakɛse a ɛwɔ wiase nyinaa wɔ asɔredan, * na nnipa mpempem pii kɔ hɔ kɔsom. Sɛ wokɔ aman a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo mu a, asɔre ne asɔredan pii wɔ hɔ a wɔde Yesu, Maria, ne ahotefo din atoto so. Asɔredan a ɛte saa no bi wɔ mmeae ahorow bi a Bible ka sɛ nsɛm bi sisii wɔ hɔ, anaa wɔkyerɛ sɛ “anwonwade” asi wɔ hɔ nnansa yi ara. Ebi nso wɔ mmeae a wɔakora ɔsom mu nneɛma so wɔ hɔ. Nnipa pii kɔ asɔredan ahorow yi mu kɔbɔ mpae efisɛ wogye di sɛ beae kronkron paa na sɛ wɔbɔ mpae a Onyankopɔn betie wɔn. Afoforo nso tu kwan kɔ saa mmeae yi de kyerɛ sɛ wɔyɛ nyamesomfo mapa.
Nnipa a wɔakɔ Ise Asɔredan Kɛse a ɛwɔ Japan, ne Grotto a ɛwɔ Massabielle, Lourdes, France
Sɛ yɛbɔ mpae wɔ baabi a wobu no sɛ ɛyɛ kronkron a, ɛno paa na ɛbɛma wɔatie yɛn anaa? Wɔn a wotu kwan kɔ mmeae a ɛte saa no, Onyankopɔn ani begye wɔn som ho anaa? Sɛ yɛbɛka a, ɛsɛ sɛ Kristofo kɔ baabi a wobu no sɛ ɛyɛ kronkron kɔsom? Nsɛmmisa yi ho mmuae bɛma yɛahu adwene a ɛsɛ sɛ yenya wɔ baabi a wobu no sɛ ɛyɛ kronkron a wɔkɔsom wɔ hɔ ho. Afei nso, ɛbɛma yɛahu ɔsom ankasa a Onyankopɔn ani gye ho.
SOM “HONHOM NE NOKWARE MU”
Bere a Yesu kae sɛ ɛsɛ sɛ yɛsom wɔ “honhom ne nokware” mu no, na ɔkyerɛ sɛn?
Yesu ne Samariani bea bi bɔɔ nkɔmmɔ. Saa nkɔmmɔbɔ no ma yehu Onyankopɔn adwene wɔ baabi a wobu no sɛ ɛyɛ kronkron a obi bɛkɔ akɔsom wɔ hɔ ho. Ná Yesu retu kwan akɔfa Samaria. Oduu abura a ɛbɛn Sikar ho no, ogyina gyee n’ahome. Ɔne ɔbea bi a na ɔrebɛsaw nsu fii ase bɔɔ nkɔmmɔ. Bere a wɔrebɔ nkɔmmɔ no, ɔbea no kaa nsonsonoe kɛse a na ɛda Yudasom ne Samariafo som ntam ho asɛm. Ɔkae sɛ: “Yɛn agyanom som wɔ bepɔw yi so; nanso mo de, moka sɛ Yerusalem ne baabi a ɛsɛ sɛ nnipa som.”—Yohane 4:5-9, 20.
Bepɔw Gerisim ho asɛm na na ɔbea no reka. Wufi Yerusalem atifi fam rekɔ hɔ no bɛyɛ kilomita 50. Bere bi na Samariafo wɔ asɔredan bi wɔ hɔ, na ɛhɔ na na wodi afahyɛ ahorow bi te sɛ Twam. Nanso, sɛ anka Yesu de n’adwene besi saa nsonsonoe yi a ɛde akyinnyegye ba so no, ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Ɔbea, gye me di, dɔn no reba a morensom Agya no wɔ bepɔw yi so anaa Yerusalem.” (Yohane 4:21) Yudani na ɔreka saa asɛm yi, hwɛ anwonwasɛm! Dɛn nti na na wɔrensom Onyankopɔn wɔ n’asɔrefie a ɛwɔ Yerusalem no bio?
Yesu toaa so kae sɛ: “Nanso dɔn no reba, na adu, sɛ nokware asomfo bɛsom Agya no honhom ne nokware mu, na nnipa saa nso na Agya no hwehwɛ ma wɔasom no.” (Yohane 4:23) Mfe pii mu no, na Yudafo bu asɔrefie kɛse a ɛwɔ Yerusalem no sɛ baabi a ɛsɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn. Afe biara na wɔkɔ hɔ mprɛnsa kɔbɔ afɔre ma Yehowa, wɔn Nyankopɔn no. (Exodus 23:14-17) Nanso, Yesu kae sɛ weinom nyinaa to betwa, na “nokware asomfo” bɛsom wɔ “honhom ne nokware mu.”
Ná Yudafo asɔrefie no yɛ ɔdan ankasa a ɛwɔ baabi pɔtee. Nanso honhom ne nokware nyɛ nneɛma a yɛde yɛn ani ankasa hu. Enti na Yesu reka sɛ nokware Kristofo rensom wɔ ɔdan anaa baabi pɔtee. Wɔrenyɛ saa wɔ ebia Bepɔw Gerisim so, Yerusalem asɔrefie no, anaa beae kronkron bi.
Nkɔmmɔ a Yesu ne Samariani bea no bɔe mu no, ɔsan kae sɛ “dɔn” a nsakrae yi bɛba wɔ Onyankopɔn som mu no “reba.” Ɛyɛ bere bɛn? Saa dɔn no bae bere a Yesu de ne nkwa bɔɔ afɔre no. Ɛno maa Yudafo som a egyina Mose Mmara so no baa awiei. (Romafo 10:4) Nanso Yesu san kae sɛ: “Dɔn no . . . adu.” Dɛn ntia? Efisɛ ɔne Mesia no, na na wafi ase reboaboa asuafo a wobedi ahyɛde a edi so yi ano. Ahyɛde no ne sɛ: “Onyankopɔn yɛ Honhom, na ɛsɛ sɛ wɔn a wɔsom no no som no honhom ne nokware mu.” (Yohane 4:24) Ɛnde, sɛ yɛka sɛ obi resom wɔ honhom ne nokware mu a, ɛkyerɛ sɛn?
Bere a Yesu kae sɛ yɛnsom Onyankopɔn wɔ honhom mu no, na ɔnkyerɛ sɛ yɛmfa ahoɔden nhuruhuruw anaa yɛnteɛteɛm mmɔ mpae. Mmom na ɔreka sɛ yɛmma Onyankopɔn honhom kronkron nkyerɛ yɛn kwan, na ɛmmoa yɛn mma yɛnte Kyerɛwnsɛm no ase. (1 Korintofo 2:9-12) Na nokware a Yesu kaa ho asɛm no nso yɛ Bible nkyerɛkyerɛ a yɛbɛte ase yiye. Enti sɛ Onyankopɔn ani bɛsɔ yɛn som a, gye sɛ egyina nea Bible kyerɛkyerɛ no so. Afei nso, ɛsɛ sɛ yɛma ne honhom kronkron kyerɛ yɛn kwan mmom sen sɛ yɛbɛsom wɔ beae titiriw bi.
KRISTOFO ADWENE WƆ BAABI A WOBU NO SƐ ƐYƐ KRONKRON HO
Ɛnde, ɛsɛ sɛ Kristofo bu akwantu a ɛma wɔhyɛ da twa kwan kɔsom wɔ baabi a wobu no sɛ ɛyɛ kronkron no sɛn? Sɛ yesusuw ahyɛde a Yesu de mae sɛ ɛsɛ sɛ nokware asomfo som Onyankopɔn wɔ honhom ne nokware mu no ho a, ɛda adi pefee sɛ ɛnyɛ baabi a wobu no sɛ ɛyɛ kronkron a obi bɛkɔ akɔsom yɛn soro Agya no na ehia no. Bio nso, Bible no ma yehu Onyankopɔn adwene wɔ ahonisom ho. Ɛka sɛ: “Munguan abosonsom” na “monhwɛ mo ho yiye wɔ ahoni ho.” (1 Korintofo 10:14; 1 Yohane 5:21) Enti nokware Kristoni nkɔsom wɔ beae bi a wosusuw sɛ ɛyɛ kronkron anaasɛ ɛhyɛ abosonsom ho nkuran. Esiane nea ɛkɔ so wɔ saa beae hɔ no nti, nokware Kristofo nkɔsom wɔ hɔ.
Nanso wei nkyerɛ sɛ Onyankopɔn Asɛm ka sɛ ɛnsɛ sɛ yenya baabi a yɛbɛbɔ mpae, yebesua Bible na yɛadwinnwen ho. Sɛ yenya baabi pa hyiam a, ɛboa ma yetumi sua Onyankopɔn ho ade, na yesusuw ho. Saa ara nso na ɛnyɛ mfomso sɛ yɛbɛka obi nna so akyerɛw biribi agu so de akae no. Wei betumi ayɛ biribi kɛkɛ a ɛma yɛkae yɛn dɔfo bi a wawu anaa ɛkyerɛ sɛ na yɛdɔ no. Nanso sɛ yenya adwene sɛ ɛhɔ yɛ kronkron anaa yɛbɛsom nkaedeɛ no a, na yɛantie nea Yesu kae no.
Enti enhia sɛ wokɔ baabi a wobu no sɛ ɛyɛ kronkron kɔbɔ mpae ansa na woahu sɛ Onyankopɔn betie wo. Saa ara nso na enhia sɛ wutu kwan kɔ asɔredan pɔtee bi mu na ama woasɔ Onyankopɔn ani anaa woanya ne nhyira. Bible ma yehu sɛ Yehowa Nyankopɔn, ‘ɔsoro ne asase Wura no, nte asɔredan a wɔde nsa ayɛ mu.’ Nanso wei nkyerɛ sɛ Onyankopɔn wɔ akyirikyiri. Yebetumi abɔ mpae wɔ baabiara ma watie efisɛ “ɔne yɛn mu biara ntam nware.”—Asomafo Nnwuma 17:24-27.
^ nky. 2 Ebetumi aba sɛ, Shinto asɔredan biara ne amanne a wɔyɛ wom.
^ nky. 3 Hwɛ adaka “ Mmeae a Wobu No Kronkron.”
Mmeae a Wobu No Kronkron
Ebinom ayɛ mmeae bi kronkron, na wɔsom onyame anaa ‘ɔhotefo’ bi wɔ hɔ. Mpɛn pii no, wɔkora ahoni anaa ɔsom mu nkaedeɛ a wogye di sɛ ɛyɛ anwonwade anaa wohui wɔ anisoadehu mu wɔ hɔ. Ebinom asiesie wɔn fie no fã baabi ayɛ no kronkron. Asia ne Aburokyiri nsase bi so no, wɔayeyɛ wɔn afie no fã bi mmeae kronkron, na ɛhɔ na wɔbɔ mpae, dwinnwen nneɛma ho anaa wɔbɔ afɔre.
Ɛnyɛ mmeae a ɛte saa nyinaa na wɔyɛ ɔsom mu nyankomade wɔ hɔ. Wɔ wiase no mu no, sɛ nkurɔfo nya kar akwanhyia wu a, beae a esii no, wɔn abusuafo ne wɔn nnamfonom taa yɛ nkaedeɛ bi de kae wɔn wɔ hɔ. Ɛtɔ mmere bi nso a, wɔyɛ nkaedeɛ bi de kae nkurɔfo a wowui wɔ ɔko anaa atoyerɛnkyɛm bi mu. Ɛwom sɛ nkaedeɛ a ɛte saa no ma nkurɔfo nya hokwan dwinnwen nea esii no ho, na wodi awerɛhow de, nanso mpɛn pii no, ɛma yehu gyidi a wɔn a wɔyɛe no kura.
ASƐM A ƐDA SO Asɛm Yi Sii Ampa?
ASƐM A ƐDA SO Dɛn Nti Na Yesu Huu Amane Na Owui?
Sɛ Wutie Kɔkɔbɔ a, Ebetumi Agye Wo Nkwa!
Eti ne Nkyekyɛm Ahorow​—Hena na Ɔde Hyehyɛɛ Bible no Mu?
Hena ne Ɔbonsam?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN No. 2 2016 | Dɛn Nti Na Yesu Huu Amane Na Owui?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN No. 2 2016 | Dɛn Nti Na Yesu Huu Amane Na Owui?
No. 2 2016 | Dɛn Nti Na Yesu Huu Amane Na Owui?
ƆWƐN-ABAN No. 2 2016 | Dɛn Nti Na Yesu Huu Amane Na Owui?